Sendoso: Mee ka ntinye aka, nnweta, na njigide na Direct Mail | Martech Zone
Sendoso: Mee ka ntinye aka, nnweta, na njigide na Direct Mail
Thursday, June 11, 2020 Fraịdee, June 12, 2020 Douglas Karr
Mgbe m rụrụ ọrụ na isi SaaS, otu ụzọ dị mma anyị si mee ka ndị ahịa na-aga n'ihu bụ iziga ndị ahịa anyị ahịa onyinye pụrụ iche na nke bara uru. Ọ bụ ezie na ụgwọ maka azụmahịa ọ bụla dị oke ọnụ, itinye ego nwere nnukwu ego na ntinye ego.
Site na njem azụmahịa na ihe omume mebiri, ndị na-ere ahịa nwere nhọrọ ole na ole iji ruo atụmanya ha. Ghara ikwu eziokwu na ụlọ ọrụ na-eme mkpọtụ karịa site na ọwa dijitalụ. Direct mail bụ ike ịrị elu karịa mkpọtụ, na-elu nke 30x nzaghachi ọnụego nke email.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ime ka ndị na-ege gị ntị nwee obi ụtọ, na-akpali akpali, ma nwee mmetụta dị egwu, ị nwere ike ịga n'ihu njem ahụ. Sendoso bụ onye na - eweta ọrụ ndị a - site na nhọrọ ngwaahịa, na akpaaka, na ntinye azụmahịa, site na mmezu. A maara atụmatụ a dị ka ngwa ngwa ahia ahia.
Nsonaazụ ahụ dị oke mma, ndị ahịa Sendoso enwetala:
22% abawanye na ego ha nwetara na ohere ọ bụla
35% abawanye na ntụgharị na nzukọ
60% nzaghachi ọnụego site na nchịkọta ezigara
450% laghachi na ego ha nwetara site na azụmahịa emechi
500% mmụba na ọnụego dị nso
Site n'iji nkwenye adreesị, Sendoso nwere ike izipu atụmanya gị ma ọ bụ ndị ahịa ngwaahịa nke ahaziri iche, ngwa ngwa, ịla n'iyi, ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla nke Amazon. A na-ejikọkwa ikpo okwu na isi nyiwe akpaaka ahịa, usoro ntinye aka ahịa, CRMs, nyiwe ntinye aka nke ndị ahịa na ecommerce.
Na-ebuli njem njem nke Gị
Mmata - zipu 3D mmapụta kaadị, akwụkwọ ndetu, akpa tote, obere chaja, ma ọ bụ obere obere swag iji banye na radar ndị mmadụ.
mkpebi - soro rụọ ọrụ nke ọma na akaụntụ gị site na iziga ndị na-ezigara gị ozi ma ọ bụ jaket dị elu na-egosipụta akara ngosi gị.
Ntụle - Mee ka ndị na-ege gị ntị nwee mmasị na ebumnuche n'etiti ndị na-ege gị ntị na ndị na-ezigara vidiyo ma ọ bụ ihe ngosi dị ụtọ na-egosi njirimara gị.
Mee ngwangwa gị Funnel
Ihe atụ ụfọdụ nke ngwaahịa ị nwere ike gbanye machibidoro nke:
Ọnụ ụzọ mepere emepe - Banye na tebụl mmadụ kama ịlụ ọgụ na igbe mbata ha na ihe ejiri ahaziri onwe gị site na Amazon nwere ederede ejiri aka dee.
Kenye Accelerators - Mee ka mmekọrịta dị mma ma mechaa mkparịta ụka mkparịta ụka na karama mmanya ahaziri na njirimara ụlọ ọrụ gị.
Ndị Na-eme Nzukọ - Soro ọtụtụ ndị na-eme mkpebi otu oge site na izipu kọfị, kuki, ma ọ bụ ọgwụgwọ ndị ọzọ na-atọ ụtọ nke ụlọ ọrụ ahụ niile nwere ike ịkekọrịta.
Iji Sendoso, ụlọ ọrụ ngwanrọ maka ịntanetị na njikọ aka na ntanetị,nwere ike iru $ 100M na paịpụ na $ 30M na ego ha nwetara site n'otu mkpọsa. Ha zigara ụyọkọ 345 na akaụntụ ABM, gụnyere kaadị onyinye, ihe ụtọ dị ụtọ, infographic Impact Economic, Total Economic Impact Executive, yana akwụkwọ ejiri aka dee.
Mmekọrịta ndị mepụtara gụnyere Salesforce, Salesforce Marketing Cloud, Salesforce Pardot, Eloqua, Hubspot, Outreach, Salesloft, SurveyMonkey, Mmetụta, Shopify na Magento.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmụtakwu banyere otu 1: 1 ahịa nke ahaziri iche nwere ike isi mepụta mmata ihe bara uru ma wulite pipeline post-COVID gị, rịọ maka demo Sendoso.
Rịọ Sendoso Demo
Tags: okwuokpokoroNa-emetụtamagentoije ozigbondị ahịaMgbaghara ahịaAhịa Cloud ahịaỌrịre ahịaụlọ ahịaSurveyMonkey